Barlamaanka oo kalsoonidi kala laabtay Xukuumadda Kheyre | KEYDMEDIA ONLINE
27 November 2020 Muqdisho oo foolaneysa dagaal sokeeye
Barlamaanka oo kalsoonidi kala laabtay Xukuumadda Kheyre
Arintaan ayaa banaanka soo dhigeyso shaki laga qabay kala aragti duwaanaashaha Farmaajo iyo Kheyre ee dhanka doorashadda.
July 25, 2020 - 9:27:00
DEG DEG: Ku-simaha R/wasaaraha Dalka ayaa C/risaaq Xuseen Aadan u magacaabay in si KMG ah uu u haayo xilka xog-hayaha Joogtada ah ee Xafiiska R/wasaaraha.
July 25, 2020 - 6:21:00
Nairobi - Keydmedia Online
Qoraal ka soo baxay Madasha Xisbiyada Qaran ayaa lagu sheegay in kalsooni kala noqoshadii Xukuumadda ay u jeedkiisa aheyd carqaladeyn iyo bur-burin go'aannadii shirkii Dhuusamareeb, isla markaana tahay mid loogu gogol xaarayo muddo kororsi aan sharci ahayn.
Sidoo kale, Xisbiga Wadajir ayaa cambareeyay xil ka qaadista RW Kheyre oo ay ku tilmaameen 'Sharci darro', wuxuuna Xisbigu ku tilmaamay Farmaajo Madaxweyne aan dhowreen Dastuurka, rabana Xil kororsi
July 25, 2020 - 5:21:00
Xukuumad cusub ayaa la filayaa in dalka loo soo magacaabo mudo bil gudaheeda ah, iyadoo Kheyre xilka qaadiisa laga baqayo inay jahwareer keento.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto Madaxweyne ugu igmaday Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo ahaa Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya sii socodsiinta iyo maareynta howlaha Golaha Xukuumadda si kumeel gaar ah.
Madaxweynaha ayaa adkeeyay in ay dalka ka dhacayso doorasho waqtigeeda ku qabsoonta oo lagu wada qanacsan yahay, waafaqsanna Dastuurka iyo Sharciga Doorashooyinka dalka iyo in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka go’an tahay ka shaqeynta qodobadii ku soo baxay war-murtiyeedkii Dhuusamareeb iyada oo shirka xiga loo ballansan yahay 15ka Ogoosto 2020.
July 25, 2020 - 4:40:00
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto Madaxweyne ugu igmaday Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo ahaa Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya sii socodsiinta iyo maareynta howlaha Golaha Xukuumadda si kumeel gaar ah.
July 25, 2020 - 3:45:00
Raiisul Wasaare Kheyre oo hada ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho.
July 25, 2020 - 3:36:00
Illo xog-ogaal ah ayaa KEYDMEDIA ONLINE u xaqijiyay inuu jiro amar uu Fahad Yaasiin bixiyay oo Kheyre xabsi guri lagu gelinayo, hadii ka biyo-diido xilka-qaadista lagu sameeyay Maanta.
July 25, 2020 - 3:30:00
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida uu sheegay Mursal, sababaha Kalsooni kala Noqoshada Ra'iisuwasaare Kheyre waxaa kamid ah inuu ku fashilmay dalka inuu u diyaariyo doorasho qof iyo cod ah, inuu ku guuldareystay dhameystirka nidaamka Federaalka, inuu ku fashilmay maqaamka Muqdisho, inuu dhameystiri waayay dastuurka, sidoo kalena qaadi waayay afti dadweyne iyo inuu dhameystiri siyaasadda ku dhisan xisbiyada badan.
Farmaajo iyo Kheyre faankoodii ahaa isma-khilaafayno, waxaana ka duwanahay Ra’iisul Wasaariyaashii iyo Madaxweynihii naga horeeyay waxuu soo afjarmay maanta, oo burburay midnimadoodii siyaasadda.
Su’aalaha kale ee dadku iswaydiinayaan waxaa kamid ah side 170 Xildhibaan ugu codeeyeen Mooshinka kasooni kala noqoshada, iyadoo la ogyahay in Gollaha Wasiiradda 70% ay ahaayeen Xildhibaanno taageersan Kheyre.
Qorshahan xilka qaasidta Kheyre oo la rumeysan yahay inuu ka shaqeeyay Fahad Yaasiin xalay, ayaa muujinaysa in Wasiiradda qaar ay noqdeen seef labo afleh, oo dhinac kale hadda la saftay, iyadoo ay jirto balan-qaadyo loo sameeyay, hadii ay ahaan lahayn lacag ama xilal cusub.
Keydmedia Online ayaa horaantii bishan usoo qortay xogta la xiriirta in Kheyre xilka laga qaadayo, kadibna uu Farmaajo kula gor-gortami doono Mucaaradka, oo uu doonayo inay aqbalaan mudo korarsigiisa [Halkan ka akhri warbixnta].
Farmaajo ayaa shirka 15-ka August ka dhici doono Dhuusamareeb miiska u saari doono Maamullada iyo Mucaaradka xilka Ra’iisul Wasaaraha, si ay go’aan uga gaaraan inay soo dhisaan xukuumad wadaag ah.
July 25, 2020 - 3:13:00
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa KEYDMEDIA ONLINE u xaqiijiyay in qaar ka mid ah Wasiirradii Kheyre ay damceen in ay Bankiga dhex saakay kasoo baxshaan lacag loogu talagalay diyaaraddii kasoo qaadi laheyd RW Kehyre magaaladda Dhuusamareeb. Bankiga Dhexe ayaa codsigaas diiday kuna amray in ay la xariiraan Xafiiska Madaxweyne Farmaajo.
July 25, 2020 - 2:55:00
Madasha Xisbiyada Qaran oo lagu wado in ay goordhow qoraal ka soo saarto kalsooni kala noqoshadii Xukuumadda Kheyre ee Baarlamaanka Soomaaliya.
July 25, 2020 - 2:45:00
Halkaan ka Dhageyso Warbixinta Keydmedia Radio ee Maanta oo looga hadlayo xiisadda Siyaasaddeed ee Maanta ka taagan Magaalada Muqdisho:
Keydmedia Online · 25.07 - Wararka Maanta ee Keydmedia Radio
July 25, 2020 - 2:39:00
Dhuusamareeb - Keydmedia Online
Ra'iisul Wasaare Kheyre ayaa kasoo duulay Dhuusamareeb, isagoo kusoo jeeda Muqdisho. Waxaa lagu waddaa Kheyre inuu ka hadlo go’aanka Gollaha Shacabka, ee ku aadan kalsooni kala noqoshadda Xukuumadiisa.
July 25, 2020 - 2:14:00
Warar ay Keydmedia Online ka heshay xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo ayaa sheegaya in Farmaajo uu xil ka qaadista Xukuumadda Kheyre hore u qorsheynaayay, tahayna arin uu rabo in uu kusoo dhaweeyo mucaaradka.
July 25, 2020 - 12:35:00
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo waxaa soo gaartay go’aanka ay Xildhibaannada Golaha Shacabka codka kalsoonida kala noqdeen Xukuumadda Ra'iisul-Wasaare Xasan Cali Kheyre.
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa fadhigii maanta kaga dhawaaqay in xukuumadda kheyre fashilantay, sidaas awgeedna kalsoonidii uu Baarlamaanka kala laabtay.
Baarlamaanka oo maanta kulan aan caadi aheyn kulahaa xarunta Villa Hargeysa ayaa waxuu ku soo dhamaaday buuq iyo fowdo ay sameeyeen qaar katirsan Xildhibaanadii soo xaadiray oo u badnaa taageerayaasha Farmaajo.
Mursal ayaa sheegay in 170 Xildhibaan ay u codeeyeen Mooshinka xilka looga qaadey Kheyre, halka 8 kale ay diidaan. Arintaan ayaa la sheegayaa in ay salka ku heyso kala aragti duwaanashaaha Madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha ee doorashadda.
Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Isloow, oo kulanka kadib shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in Mooshinka lagu riday Xukuumadda uu katirsan yahay uu yahay mid aan sharci ahayn.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa si deg deg ah u aqbalay xilka qaadista lagu sameeyay Kheyre, isagoo sidoo kale balan-qaadey inuu sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo magaaabi doono Ra'iisul Wasaare cusub.
0 Comments Topics: doorashadda 2020 farmaajo mooshin
Muqdisho oo foolaneysa dagaal sokeeye